Ukukhutshwa kweRhafu kunye noMsebenzi wezoPolitiko weCawa: Iimigaqo-nkqubo kunye nemithetho
Iimigaqo-nkqubo kunye nemithetho
Nangona kukho inzuzo eninzi ehamba kunye neerhafu ezingenakunyulwa ngethemba lokuncedisa, kukho enye impendulo ebalulekileyo ebangele ingxoxo kwaye kungekho ubunzima obuncinane: ukuthintela umsebenzi wezopolitiko, ukuthatha inxaxheba ngokuthe ngqo kumaphulo ezopolitiko egameni okanye nayiphi umviwa othile.
Kubalulekile ukuqonda ukuba le nqamaniso ayithethi ukuba imibutho yonqulo kunye namagosa abo akakwazi ukuthetha kuyo nayiphi na imibandela yezopolitiko, ezentlalo, okanye yokuziphatha.
Le yinto engafanelekanga into eyenziwa ngabantu abathile kwiinjongo zezopolitiko, kodwa akunakulungile.
Ngokungabonakalisi iicawa, urhulumente uthintela ukuba angene ngqo ngokucacileyo ukuba iicawa zisebenza njani. Ngolu hlobo olufanayo, loo maqumrhu ayanqandwa ukuphazamiseka ngokuthe ngqo kwindlela urhulumente asebenza ngayo ukuba abanako ukuxhasa bonke abavoti bezopolitiko, abakwazi ukukhankasela egameni labaphi na abaviwa, kwaye abanakuze bahlasele nayiphi na umviwa ofanelekileyo ukwenzela ukuba avume ngokuqinisekileyo loo mntu umchasi.
Oko kuthetha ukuthini ukuba imibutho yoncedo kunye nenkolo efumana i-501 (c) (3) yokuxolelwa kwerhafu inekhethelo ecacileyo nelulayo yokwenza: banokubandakanya kwimisebenzi yonqulo baze bagcine ukuxolelwa kwabo, okanye banokuzibandakanya kwimisebenzi yezopolitiko kwaye balahlekelwe , kodwa abakwazi ukuzibandakanya kwimisebenzi yezopolitiko kunye nokugcina ukukhululwa kwabo.
Ziziphi iindidi zeempahla kunye nezinye iinkonzo zonqulo ezivunyelwe ukuba zenze?
Bangakwazi ukumema abaviwa bezopolitiko ukuba bathethe ixesha elide njengoko bengavumi ngokucacileyo. Bayakwazi ukuthetha malunga neentlobo ezahlukeneyo zezopolitiko kunye nokuziphatha, kubandakanywa nemiba enokuphikisana nokukhupha isisu kunye ne-euthanasia, imfazwe kunye nokuthula, intlupheko kunye namalungelo oluntu.
Inkcazo malunga nemiba enokuthi ibonakale kwiibhengezo zecawa, kwiintengiso ezithengiweyo, kwiinkomfa zeendaba, kwiintshumayelo, nakwezinye iicawa okanye iinkokeli zebandla zingathanda ukuba isigidimi sabo sithunyelwe.
Kutheni, okokubalulekile kukuba, ukuba amazwana anjalo aphelelanga kwimibandela kwaye alahleki apho abaviwa kunye nezopolitiko zimileyo kule micimbi.
Kulungile ukuthetha ngokuchasene nokukhipha isisu, kodwa ukuhlaselwa ngumviwa oxhasa amalungelo okukhipha isisu okanye ukuxelela ibandla ukuba lincome ummeli ukuba avotele ibhilikhwe ethile eya kukhishwa isisu. Kuhle ukuthetha ngokuchasene nemfazwe, kodwa kungekhona ukuvumela umviwa ochasene nemfazwe. Ngokuchasene noko abanye ababambe iqela lokubambisana banokufuna ukufaka ibango, akukho mithintelo yokuthintela abefundisi ukuba bangathethi kwimibandela kwaye akukho mithetho yokuphoqa abefundisi ukuba bahlale bathule kwiingxaki zokuziphatha. Abo babanga okanye bathetha ngenye indlela ba khohlisa abantu-mhlawumbi ngamabomu.
Kubalulekile ukugcina engqondweni ukuba ukuxolelwa kweerhafu ngumcimbi "wenceba yomthetho," oku kuthetha ukuba akukho mntu unelungelo lokuxolelwa kweerhafu kwaye akakhuselwe nguMgaqo-siseko. Ukuba urhulumente akafuni ukuvumela ukuxolelwa kweerhafu, akufanele. Kuya kubahlawuli berhafu ukuba baqinisekise ukuba banelungelo lokufumana iimpazamo apho urhulumente avumela ukuba: ukuba abahluleki ukuhlangabezana nalo mthwalo, ukuxolelwa kungakhishwa.
Ukwenqaba okunjalo akukona, kodwa, ukuphulaphula inkululeko yabo yokusebenzisa inkolo. Njengoko iNkundla ePhakamileyo ibonile kwimeko ka-1983 yeRegan v. Ukuhlawulwa kweentlawulo kunye nokumelelwa kweWashington, "isigqibo sesigqeba sokungaxhasi ukusetyenziswa kwelungelo elibalulekileyo aliphuli ilungelo."
I-Matrix, Inkolo kunye nefilosofi
I-Agnostic Theism - Dictionary Inkcazo
IsiNgesi-saseJamani Iinkcukacha zokuthenga kunye neSigama
I-Zimmermann Telegram - iMelika ixhaswa kwiWW1
Imifanekiso yesiFrentshi ngeCasser